Orinasan-tsoratry ny telefaona finday - Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana finday any Sina
Mpanamboatra matihanina sy mpamatsy kojakoja finday eto Chine izahay ary nanolo-tena hanome serivisy OEM / ODM ho an'ireo mpivarotra ambongadiny, marika, orinasa ary mpizara. Ny karazana vokatra eto an-toerana dia misy ny tranga an-telefaona namboarina, mpihazona telefaona finday, kojakoja finday, fatorana telefaona, mpanadio efijery finday, sns. Avy amin'ny asa isan-karazany ka hatramin'ny fitaovana, ao anatin'izany ny pvc, silikola, vy, microfiber, TPU ary fitaovana PC. Ny ankamaroan'ny kojakoja finday misy bobongolo efa misy dia tsy manefa sarany bobongolo. Fitaovana fampiasa amin'ny telefaona manokana miaraka amin'ny endrika manokana, logo, marika manokana ary fonosana anao. Zahao ny tranga isan-karazany, mpihazona peratra, fijanonana telefaona sy maro hafa.